Kuthiwa uzongenela umbango wesikhundla sobumengameli uNgqongqoshe | News24
Kuthiwa uzongenela umbango wesikhundla sobumengameli uNgqongqoshe
Cape Town – Njengoba uya ngokushuba umbango wozongena esikhundleni sikaMengameli Jacob Zuma, uNgqongqoshe wezokuhlaliswa koMphakathi, uLindiwe Sisulu, kulindeleke ukuthi afake igama lakhe esiyingini sabagaqele lesi sikhundla.
Ngokusemthethweni, i-ANC ayikuvumeli ukukhankasela lesi sikhundla ngokuvulelekile kodwa uSekela Mengameli, uCyril Ramaphosa, kanye nalowo owayenguSihlalo we-AU Commission, uNkosazana Dlamini-Zuma, kukholakala ukuthi yibona abahamba phambili embangweni walesi sikhundla.
Iphephandaba iSowetan ibike ukuthi igatsha le-ANC e-Eastern Cape limeme uSisulu ukuthi azokwethula inkulumo emcimbini wokuqanjwa kabusha ngokusemthethweni kwaleli gatsha ngoMgqibelo, futhi ‘libhunga” naye ngombango wesikhundla.
OLUNYE UDABA: UZuma ugadle kulabo abangamufuni
Leli phephandaba lithi sekusatshalaliswe izinto ezinobuso bukaSisulu nalapho kubhalwe khona ukuthi "Sisulu17".
USihlalo wegatsha laseMathole, uSiphiwo Venkile, utshele iSowetan ukuthi: “[uSisulu] ngumholi onesipiliyoni osephathe inqwaba yeminyango kahulumeni futhi waya ekudingisweni waphinde waba kwi-MK [Umkhonto weSizwe, uphiko lombutho wezempi lwe-ANC].
“Lokhu ukwethulwa kwegatsha lethu kodwa asikwazi ukushiya izingxoxo zesikhundla zangoDisemba.”
Kodwa-ke okhulumela uSisulu, uVusi Tshose, utshele leli phephandaba ukuthi lo mcimbi kuzobe kungowokuqanjwa kabusha nje kwegatsha, ngakho uSisulu umenywe njengeLungu leNational Executive Committee (NEC) ye-ANC.
NgoFebhuwari, iMail & Guardian yabika ukuthi abalandeli bakaSisulu bambona njengomuntu okunguyena ofanelwe yilesi sikhundla ngoba bathi unomlando omuhle ongenalo ichashaza futhi akahlangene nobuqembuqembu ngaphakathi ku-ANC.